Dhacdo.com - News: Barnaamij cusub oo muhiim ah oo ku soo kordhay Saaxada Saxaafada ee Soomaalida (Daawo Video)
16,279,157 unique visits
Barnaamij cusub oo muhiim ah oo ku soo kordhay Saaxada Saxaafada ee Soomaalida (Daawo Video)
Waxaa Saaxada Saxaafadda ee Soomaalida ku soo kordhay barnaamij cusub oo loo-baahnaa kol hore, kaasoo dadka Soomaaliyeed ee dagaalada iyo barakaca ka daalay ay ku soo xulan karayaan, shakhsiga dhibaatada ay maanta ku jiraan ka saari kara.
Barnaamijkaan oo loogu magac-daray “Barnaamijka Musharax” ayaa waxaa hindisay Wariyaha Soomaaliyeed ee rug-cadaadiga ah Maxamed Barre Xaaji "Fiyoore", oo si weyn looga yaqaano dal iyo dibadda.
Barnaamijka Musharax ayaa wuxuu u furan yahay musharax walba oo doonaaya in uu ku guuleysto jegada Madaxtinimada ee Soomaaliya, oo Magaalada Muqdisho lagu qaban doono bisha Luulyo ee foodda inagu soo heysa, haddii u Alle raali ka noqdo.
Barnaamijkaan oo ka bixi doona Telefishinka Caalamiga ah ee Royal, sidoo kalana laga dhageysan karo Idaacada Danan ee Magaalada Muqdisho, ayay dadka Soomaaliyee si toos ah ugala socon karaan, iyagoo markaasi ku qiimeynaaya musharax walba kolka uu martida uu ku yahay barnaamijkaan.
Horudhaca Barnaamijka cusub ee Musharax
Barnaamijka Musharax ayaa waxay dadku ku kala bixin karaan kan u saaxiibka ah daacadnimada, kana go’an tahay in uu wax ka qabto xaalada murugsan ee uu dalku ku sugan yahay iyo midka aysan daacadu ka ahayn musharaxnimadiisa.
Dadka oo durbaba saadaal ka bixinaaya Barbaamijka Musharax ayaa waxay sheegeen in uu noqon doono mid xiiso badan, bacdamaa ay sheegeen in magaca barnaamijka uu yahay mid xambaarsan xiiso ay ku dheehan tahay xambaasad, loona baahnaa waqti hore.
Wariye Fiyoore ayaa waxaa lagu xasuustaa in uu yahay Wariyihii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay ee ka hawl-gala Telefishinka Caalamiga ah ee Universal sanadkii 2005-tii, wuxuuse dhawaan uu ka mid noqday Wariye-yaasha ka hawl-gala Telefishinka Caalamiga ah ee Royal.
Fiyoore iyo xilligiisii Universal
Rashka on July 12 2012 16:55:52 ·
0 Comments · 5451 Reads